Yako Yakazara Nongedzo kune Deer Musoro Chihuahua - Inobereka
Yako Yakazara Nongedzo kune Deer Musoro Chihuahua
Hazvingave zvinotyisa here kuva neshamwari yaunogona kutora chero kupi? Kana iwe uchida canine buddy uyo anogona tag pamwe kwese kwaunoenda, a Chihuahua (Chi) akakukwanira!
Iwe unogona kunge uchiziva nezverudzi urwu rwunodiwa rwembwa yekutambisa, asi kwete maChi ese akafanana. Muchirongwa ichi, iwe unozodzidza nezve izvo zvakakosha zvekuve neDeer Musoro Chihuahua, imwe yemhando dzakakurumbira dzerudzi.
Chidiki cheChihuahua nhoroondo
Ngatibvisei imwe nyonganiso
Chii chinonzi Deer Head Chihuahua anotaridzika?
Doer Head Chis anoita sei?
Chii chakaita sekugara neDeer Head Chihuahua?
Imbwa diki idzi dzinodhura zvakadii?
Iwe uri muridzi chaiye weDeer Head Chi?
Hapana anoziva uko kwakatangira Chihuahuas, asi vanhu vazhinji vanofunga Techichi sababa vayo.
Iyo yekare Techichi yaive inodiwa kwazvo chipfuwo pakati pevaToltecs sekutanga senge 9th century . MuMexico, nyanzvi dzekuchera matongo dzakawanawo hari dzembwa dzakatanga kare muna 300 BC dzichiratidza imbwa idzi.
Asi, waiziva here kuti iro zita 'Chihuahua' rakabva?
Muna 1850, vaongorori vakaona kuti imbwa diki idzi dzaikura mukati Chihuahua, Mexico , uye nyika yeMexico yakakurumidza kupa zita rayo kune rudzi urwu.
Pane zvakawanda zvekuvhiringidzika pamusoro pekuti Deer Musoro Chihuahua ndewe rudzi rwake. Ipo iyo American Kennel Kirabhu (AKC) inoziva iyo Chihuahua, iyo Deer Musoro Chihuahua ndiye kwete yemhando dzakasiyana zverudzi.
Kutanga, ngatijekesei zvimwe zvisina chokwadi.
Deer Musoro Chihuahuas vs Apple Musoro Chihuahuas
Apple Musoro Chihuahua ( mabviro )
Iko kusanzwisisika kwakajairika kwekuti Deer Musoro uye Apple Musoro Chihuahuas marudzi maviri akasiyana emarudzi.
Zvisinei, sezvambotaurwa pamusoro apa, haugoni kuwana Deer Head Chihuahuas semhando yepamutemo inozivikanwa neAKC, Canada Kennel Club (CKC), uye United Kennel Club (UKC).
Mashoko okuti “ musoro wenondo 'Uye' musoro weapuro ”Ndeemashoko asiri epamutemo anoshandiswa kutsanangura chimiro chembwa iyi chakasiyana.
Sezvakangoita zita rayo, Musoro weDeer Musoro waChihuahua unofanana nehunhu hwechiso cheye nondo diki. Iyo ine muromo wakareba uye nzeve huru .
Misoro yenondo dzine yakatsvedza pahuma yakatenderedzwa angangoita 45 degrees uko inosangana nemuromo. Izvo zvakare zvine makumbo marefu nemitsipa, izvo zvinoita kuti zvive zvakareba.
Kazhinji, Deer Musoro Chihuahua ndiye yakakura kupfuura Apple Musoro Chis, iyo inogara kugara pazasi pemapaundi matanhatu pakurema.
Pane rimwe divi, Apple Musoro Chihuahuas vane dzakatenderedzwa misoro yakaita apple. Ivo vane akakurumbira 90-degree angle apo huma inosangana neimu.
Apple Misoro zvakare ine mapfupi majaya uye mitsipa ine akasiyana uye anoratidza maziso. Vane makumbo mapfupi achienzaniswa nehurefu hwemuviri wavo.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti chete Apple Musoro Chis anowanzo sangana nemhando dzekubereka dzeChihuahua neAKC.
Iwo akareba jasi kana jasi rakatsetseka Chihuahuas?
Chihuahuas inogona zvakare kuva nejasi rehurefu hwakasiyana. Deer Musoro Chihuahuas anogona kunge aine a bhachi refu kana a jasi rakatsetseka .
Sezvineiwo, iyo UK Kennel Club inoziva refu-jasi Chihuahuas uye yakapfava-jasi Chihuahuas semhando mbiri dzakasiyana.
Saka nepo Deer Musoro wako Chi usinga zivikanwe zviri pamutemo nekuda kwehunhu hwayo, inogona kuverengerwa kuburikidza nehurefu hwejasi rayo.
Deer Musoro Chi nejasi refu ( mabviro )
Kune here Deer Musoro Teacup Chihuahuas?
Mhinduro pfupi ndeyekuti: hongu. Iwe uchazosangana nevaberekesi veDeer Musoro Teacup Chihuahua vana.
Iyo Teacup Chihuahua haisi yakasarudzika mhando yeChi. Iri zita rinowanzoreva Chihuahuas izvo zviri idiki pane yakajairwa mhando , inorema pakati pemapaundi maviri kusvika masere.
Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti vafudzi vanowanzo tora mukana wekuzivikanwa kwembwa diki uye zita re'tiacup 'mukuyedza kuwedzera mitengo . Saka, chenjera!
Sezvatakambotaura, musoro weDeer Musoro Chihuahuas akafanana newemwana wenondo.
Kufanana nevamwe Chis, aya maChihuahuas haakure akadaro akakura. Mazhinji Deer Musoro Chis ari nezve 8 kusvika ku12 inches (20 kusvika 30 cm) pakukwirira. Paavhareji, imbwa idzi dzinenge 10 mapaundi (4 kg) pakurema.
Kunze kwehurefu hwakasiyana hwejasi, maDeer Heads anouya mavara akasiyana . Mavara akakurisa ndeemvuri yechiropa uye shava.
Fawn, inova bhudzi ruvara, zvakare yakajairika. Iwe unogona zvakare kuwana sirivheri, chena, nhema, uye grey Deer Musoro Chihuahuas.
Usapotsa: Iyo yakajairika uye yakanyanya kunaka Chihuahua mavara
Chihuahuas dzinozivikanwa kunge imbwa hombe mumitumbi midiki.
Iva wakagadzirira kuve nebhora reyesimba simba neako Deer Musoro Chi! Ivo vakangwarira, zvakanyanya seTerrier.
Aya madiki canines ari ane rudo . Vanoda kambani yako uye vangade kuve pauri nguva zhinji.
Ivo vanogona kuita senge imbwa-inochengetedza imbwa, asi usazvidya moyo kwete! Deer Heads zvakare zviri nyore uye kashoma kuratidza kutsamwa.
Ingo tarisa pane inoyevedza Chi diki kukumbira kukwira rori:
Aya mabhora esimba ari zvinotyisa kuvimbika naizvo. Ivo vanozokudzivirira kubva kune chero munhu kana chero chinhu chavanofunga kutyisidzira kwauri. Kunyangwe pahukuru hwavo, havatyi kupinda pakati pako nenjodzi iri pedyo.
Ivo vanogona zvakare kunongedzera iri rakasimba simba kwauri. Chis anogona dzimwe nguva kuve sassy uye feisty, hunhu uhwo kudzidziswa kwakakodzera inokwanisa kudzora.
Kudzidzisa imbwa yako yakasimba
Nekuda kweiyo Chihuahuas 'diki saizi, vazhinji varidzi kazhinji havafungi kudzidziswa chinhu chakakosha. Asi, nekuda kwesimba ravo rine simba uye kuda , Chis inoda mutungamiri akasimba uye akasimba.
Izvo zvakakosha kuti vakuone iwe saiye alpha yepakeji . Zviri kwauri kuti nenzira kwayo gadzirisa chero hunhu nyaya uye udzidzise imbwa yako maitiro akanaka kuburikidza nemirairo.
Iyo Deer Musoro Chihuahua icharatidza chido chekudzidziswa achiri mudiki. Ungwaru hwavo hunovaita vakakwana pakudzidza mirairo panguva yekudzidziswa.
Kudzidziswa kunofanirwa kusimbiswa zuva nezuva - chete kuburikidza nzira dzakanaka senge mibairo - kuona hunhu hwakanaka.
Kunze kwekudzidzisa zvekutanga mirairo, iwe unofanirwa zvakare kupa nguva ku poto-kudzidziswa yako Deer Musoro Chihuahua.
Kamuviri kadiki zvinoreva dundira diki . Izvi zvinoreva kuti mudiwa wako Deer Musoro Chi anozoda kudzidza nezvenzvimbo dzakakodzera kwaanogona kuzvisunungura, sezvo achizofanira kuita izvi kakawanda.
Iyo Deer Musoro Chi iri zvishoma yakaderera-kugadzirisa imbwa. Semuenzaniso, kukura kwayo kudiki kunoreva kuti inodya chikafu chidiki pane yakakura mhando.
Smooth-coat Deer Heads, kunyanya, zviri nyore kutarisira nekuda kweye pfupi yavo fur.
Hezvino izvo zvaunoda kuti uzive nezve kugara pamwe nekutarisira Deer Musoro Chi.
Kudya kwakakodzera kweiyo diki Chi
Idiki imbwa dzinobereka, seDeer Musoro Chihuahua, dzinodya Makirori makumi mana paundi yehuremu hwemuviri pazuva.
Saka, kana Chi wako achirema anenge mapaundi masere, iwe unofanirwa kumupa chikafu chakatenderedza mazana matatu macalorie pazuva. Mukuru Chis anogona kudyiswa ¼ kusvika ¾ makapu ebibble zuva nezuva , yakakamurwa kuita mbiri kusvika katatu kudya.
Yakaoma kibble inokurudzirwa kumarudzi akaita seChihuahua nekuti kuomarara kwebblebble kunobatsira kuchengetedza mazino avo akachena.
Nekuda kwemiromo yavo midiki nehuro, Deer Musoro Chihuahuas anogona kunge aine nyaya dzekudya mamwe marudzi eakaomeswa imbwa chikafu. Ita shuwa yekupa yako Chi diki-saizi kibble saka anogona kuidya isina matambudziko.
Zvakare, ita shuwa kuti yako Chi yekudya iri mupfumi mumapuroteni nemafuta kuchengetedza mapfupa ayo akasimba uye kuchengetedza simba rayo kumusoro.
Chis anogona kuva vanodya vanodya , saka ungatofanira kuita imwe kuyedza uye kukanganisa mu kutsvaga chikafu chakakodzera kune yako Deer Musoro Chi.
Iwe unofanirwa zvakare kucherechedza kuti, sezvo maChihuahuas asingade yakawanda yekurovedza muviri, ivo vari inowanzoita kuwedzera uremu kana uchidyiswa zvisina kukodzera.
Kushambidzika zvinodiwa zveDeer Musoro Chi
Kugadzirira yako Deer Musoro Chihuahua iri nyore. Imbwa yako yekushambadzira zvinodiwa zvinoenderana nehurefu hwejasi rayo.
Mhanya bhurasho rakapfava kuburikidza neako Deer Musoro Chi's jasi rakatsetseka kanokwana kamwe pasvondo . Iwe unogona kukanganisa mvura shomanana pajasi kuti urege kupatsanurwa.
Nekudaro, kana yako Chi iri imbwa-ine bvudzi refu, iwe uchafanirwa kukwesha vhudzi rayo kazhinji. Kuti udzivise tangles, geza rako reChii bhachi kanokwana katatu pavhiki .
Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa geza wako Chi kamwe vhiki nhatu kana ina dzese . Chero chipi zvacho chinowanzoitika kupfuura icho chinogona kutungamira kumatambudziko eganda eDeer Musoro Chihuahua.
Iwe unofanirwa zvakare kufunga nezvekushandisa muromo wemazino wemazino kanokwana kaviri pazuva kana kupa yako Deer Musoro Chi mazino ekutsenga sekubata. Izvi zvinodzivirira plaque uye tartar kuvaka, izvo zvinokanganisa hutano hwavo hwemazino.
Iyi imbwa hypoallergenic?
Nehurombo, iyo Deer Musoro Chihuahua ndiye kwete imbwa hypoallergenic .
Vazhinji Chis vanodurura hura gore rese, vaine chitubu iri mwaka wavo wakanyanya kunetsa kudurura. Kugara uchigeza uye yekutsvaira maitiro kunobatsira kuchengetedza kuteura kuri pasi pesimba.
Inogona kuitika nyaya dzehutano hweDeer Musoro Chihuahua
Sezvambotaurwa pamusoro apa, Deer Musoro Chihuahuas vari inonetsekana nenzvimbo dzinotonhora .
Kuwedzeredzwa kwekushisa kwakadzika, kunyanya munguva yechando, kunogona kutungamira kune hypothermia.
Kana iwe uine pfupi-bvudzi Deer Musoro Chihuahua, iye achazoda rubatsiro kuchengetedza kudziya munguva yechando uye kudonha.
Nakidzwa nekupfekedza yako Deer Musoro Chi mune mbatya dzakaita juzi nemahembe!
Nekuda kwemapfupa avo madiki, ivo vanokanganisawo patellar luxation , inova mamiriro ekuti majoini avo anonetseke.
Unogona kuona Chis akabatwa achikamhina kana achifamba achikwira nekudzika masitepisi sezvo achinyanya kubata mabvi avo. Patellar luxation inoratidzira mune maviri mamiriro: osteoarthritis uye rheumatoid arthritis.
Chimwe chirwere chauchazoda kutarisa ndechekuti senile iris atrophy , iyo inobata maziso avo.
Sezvo Chis anokura, mhasuru dziri muiri iris dzinodzikira, zvichikonzera kunzwisisika kuchiedza. Izvi zvinogona kutotungamira ku kurasikirwa kwemaonero .
Nekuda kwemiromo yavo midiki, isingape mazino nzvimbo yakawanda yekukura, nyaya dzemazino zvakajairika pakati peChihuahuas. Vazhinji Chis vanotambura nemazino akabatwa uye enamel kupfeka.
Ichi chikonzero nei zvichikosha kugara uchiita cheki uye uchenese meno ako eDeer Head Chi paanokura.
Kunge imbwa diki diki, avhareji yehupenyu hweDeer Musoro Chihuahuas iri pakati Makore gumi nemashanu kusvika makumi maviri .
Asi, iwe unofanirwa kuyeuka kuti ivo havana kusimba nekuda kwehukuru hwavo. Ivo vanogona nyore kutsigira kukuvara kubva kusvetuka kubva pamubhedha wako kana kutamba nembwa dzako hombe.
Zvinogona kuita hunhu matambudziko erudzi
Yavo hunhu hwakasimba zvinogona kukonzera hunhu nyaya kana Deer Musoro Chihuahuas asina kunyatsodzidziswa.
Nyaya dzine kuhukura nekurumwa inogona kusimuka kana Simba reDeer Musoro Chi rakanangiswa zvisizvo kana kana vasingawane kukurudzira kwepanyama uye kwepfungwa kwavanoda.
Vamwe Chis vanozoramba vachihukura kudzamara vaona varidzi vadzo zvakare.
Chis inoda kugara uchirovedza muviri uye kushamwaridzana kugadzirisa zvinhu izvi. Vazhinji veChihuahuas vanotambura nekuparadzaniswa kunetseka, futi.
Pasina kudzidziswa kwakakodzera, senge crate kudzidziswa , Deer yako Head Chi inogona kukudziridza tsika dzakaipa dzekukuvadza fenicha yako kana kuchera kuburikidza nemarara emarara kana yasara yega.
Idzi diki Deer Musoro Chihuahua vana havauye zvakachipa! Mutengo weDeer Musoro Chi pup uriko $ 400 kusvika $ 1,200, zvinoenderana nemubereki.
Zvisinei, vazhinji vanoona izvi zvakaderera pane avhareji mutengo, sezvakaita maDeer Heads ineligible kujoina imbwa dzinoratidza zvinoenderana neAKC zviyero.
Saka kupi chaiko kwaunogona kuwana Deer Musoro Chihuahuas ari kutengeswa?
Kutanga, tarisa kune wako wemuno veterinarian kana ivo vachiziva chero mbwanana dziri kutengeswa kana kana dzakabatana neveko Deer Musoro Chihuahua vafudzi. Vamwe varidzi vanobata vet yavo kana yavo Chis vane nhumbu.
Kana iwe usine hanya nekutora imbwa yakura , unogona kushanyira yako imba yekugara . Zvinosuruvarisa, nekuti mazhinji emakirabhu emakirabhu haazive Deer Musoro Chihuahuas seyake chaiyo mhando, idzi imbwa dzinowanzo kupihwa kutorwa.
Vaberekesi veChihuahua vanowanikwa munzvimbo zhinji dzakadai seMichigan, Ohio neFlorida.
Iva nechokwadi chekuti vafudzi vako vemunharaunda vane marezinesi eAKC. Izvi zvinokudzivirira iwe nemumwe wako wenguva yemberi sevane marezinesi vanoteedzera nhungamiro yakasimba.
Iyo Deer Musoro Chihuahua inogona kunge iri diki muhukuru, asi yavo yakakura-kupfuura-hupenyu simba rine chokwadi chekuzadza chero imba. Yavo kunakidza-kuda uye simba rinehunhu inoda muridzi ane hunhu hwakafanana.
Iwe unofanirwa kutsaura nguva yavo kudzidziswa uye kufambidzana . Izvi zvakakosha kuti udzivise nyaya dzekuzvibata dzataurwa pamusoro.
Zvakare, kuwanikwa kuri nyore kune vet ane ruzivo kwakakosha. Nepo hutano hwavo huchigona, zvirwere zvinogona kunge zviripo inodhura uye yakaoma . Kuva nehunyanzvi padhuze kunozorerutsa zvimwe zvekushushikana kwako.
Iye zvino zvawave wakagadzirira kuve neyako Deer Musoro Chihuahua, isu tinoda kuziva ruzivo rwako pamwe neyako inonakidza bhora resimba. Tizivisei mune zvakataurwa pazasi.
Tsvuku Goridhe Retriever: Iyo Yakazara Imbwa Inobereka Nhungamiro
Schnoodle: Chii Chaunofanira Kuziva uye Chii Chakanaka Kwazvo
golden Retriever musanganiswa nemufudzi weGermany
watermelon zvakanaka kuti imbwa dzidye
mboro yangu inofanira kurara zvakadii